February 8, 2020 - MM Live News
အနှဈ (၁၀၀) လြှငျ တဈကွိမျ ကမ်ဘာကွီးက လူသနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့ခြိနျရောကျပွီလား … ???
February 8, 2020 MM Live News
အနှစ် (၁၀၀) လျှင် တစ်ကြိမ် ကမ္ဘာကြီးက လူသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ချိန်ရောက်ပြီလား … ??? တိုက်ဆိုင်မှုလား၊ ထူးဆန်းမှုလား၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုအသီးသီးအရ မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ် ဆိုတဲ့ အချိန်ရောက်ပြီလားမသိပါ။ အတိတ်သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ အနှစ်တစ်ရာလျှင် တစ်ကြိမ် ကပ်ရောဂါများဖြစ်ပွားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး လူသန်းနဲ့ချီ ရောဂါကူးစက်သေဆုံးခဲ့တယ့် သာဓကကို အင်တာနက်၊ You Tube ကနေထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် ၁) – ၁၇၂၀ ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ မာဆေးမြို့ကနေ စတင်ဖြစ်ပွားတယ့် အကြိတ်ရောင်ပလိပ်ရောဂါ။ ဖြစ်စဉ် ၂) – ၁၈၂၀ ခုနှစ်တွင် ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများကနေ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ ကာလဝမ်းရောဂါ။ ဖြစ်စဉ် ၃) – ၁၉၂၀ စပိန်နိုင်ငံကနေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ့် စပိန်တုတ်ကွေးရောဂါ။ ဖြစ်စဉ် […]
မွနျမာအမြိုးသမီးငယျလေးမြား အတုယူနိုငျစဖေို့ KBZ ဘဏျ သူဌေး ဥက်ကဌကွီး ဦးအောငျကိုဝငျးမှာ သမီး သုံးယောကျရှိတယျ
အတုယူဖွယ်မိန်းကလေး…? KBZ ဘဏ် သူဌေး ဥက္ကဌကြီး ဦးအောင်ကိုဝင်းမှာ သမီး သုံးယောက် ရှိတယ်။ သူ့ သမီးတွေထဲမှာ နန်းလိုင်ခမ်း Nang Lang Kham လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်က ဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ထိပ်ဆုံးအလွှာ Elite အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ရေလည်ဝင်ဆန့်ပြီး နေရာယူထားတဲ့ ပညာတက် Business Woman တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် ။အခုမှ အသက်က ၃၀ ဘဲ ရှိသေးတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာပြည်က Tycoon လို့ခေါ်တဲ့ ( ယခင် အခေါ် ခရိုနီ ) လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးတွေ Meeting လုပ်တိုင်း KBZ ရဲ့ Representative Chairman တစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်တယ်။ သူ့ အဖေက […]
ထိုငျးနိုငျငံက ပွညျသူ ၁၆ ဦးကို ဓါးစာခံလုပျထားသူ တပျကွပျရဲ့ နောကျဆုံးသတငျး…
ထိုင်းနိုင်ငံက အကြမ်းဖက်တပ်ကြပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးသတင်း Breaking news on February 8,2020 ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း နကော်ရစီမား ခရိုင် ကိုရ မြို့ ကုန်တိုက်ကြီး အောက်ထပ် Food land စားသောက်ဆိုင်ခန်းမ မှာ ပြည်သူ ၁၆ ဦးကို ဓါးစာခံလုပ် ထားသူ ထိုင်း တပ်ကြပ် ကျကဖန် ၃၂ နှစ် ဟာ ယခုအချိန်ထိ ဓါးစာခံတွေကို ထိမ်းချုပ်ထားဆဲလို့ သိရပါတယ်။ ကုန်တိုက်ကြီးပေါ်ထပ်မှာ ၀န်ထမ်းနဲ့ ပြည်သူ ရာပေါင်းများစွာ ကုန်တိုက်ထဲက ထွက်မရတော့ဘဲ ပိတ်မိနေပါတယ်။ ကုန်တိုက်အပြင်မှာ အထူးနိမ်နင်းရေးတပ်နဲ့ ရဲတွေက အကြမ်းဖက် တပ်ကြပ်ကြီး ဓါးစားခံတွေလွတ်ပေးဘို့ ညှိနိုင်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ညနေ (၄) နာရီကစပြီး တရားခံ တပ်ကြပ်ဟာ […]
ရှတေိဂုံစတေီတျောမွတျကွီး ရောငျခွညျတျော ကှနျ့မွူးနပေါတယျ…
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ချည်တော် ကွန့်မြူးပါတယ် မနေ့ညက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ချည်တော် ကွန့်မြူးပါတယ်၊2020မှာမြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အေးချမ်းတဲ့ အောင်အတိတ် အောင်နမိတ်ပါ…. ဘုရားလေးဆူတို့၏ မွေတော် ဓာတ်တော်များ ဌာပနာရာ စေတီတော်မြတ်ကြီး ဖြစ်သောကြောင့် လေးဆူ ဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံး ဘုရားစေတီမှာ ၃၂၆-ပေ ရှိသော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ပင်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ ဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ စေတီအစ ရွှေတိဂုံက ဟုဆိုကြသည်။ မနေ့ညက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ချည်တော် ကွန့်မြူးပါတယ်၊ 2020မှာမြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အေးချမ်းတဲ့ အောင်အတိတ် အောင်နမိတ်ပါ။ခရက်ဒစ် unicode မနညေ့က ရှတေိဂုံစတေီတျောမွတျကွီး ရောငျခညျြတျော ကှနျ့မွူးပါတယျ၊2020မှာမွနျမာပွညျကွီးအတှကျ အေးခမျြးတဲ့ အောငျအတိတျ အောငျနမိတျပါ […]
ကပျဘေးရောဂါက လှနျမွောကျအောငျ ရသတေ့ဈပါးလာရောကျဆကျကပျသှားတဲ့ ကပျဘေးရောဂါ အန်တရာယျကငျးတံဆိပျတျော …
ကပ်ဘေးရောဂါ အန္တရာယ်ကင်းတံဆိပ်တော် – ၄င်း ကပ်ဘေးရောဂါ.အန္တရာယ်ကင်း တံဆိပ်တော်နှင့်ဆက်စပ်ပြီး လယ်တီဦးပဒုမရဲ့တပည့် ဆရာတော်ဦးဣန္ဒာစရိယထံ ဖုန်းနဲ့လျှောက်ထားမေးမြန်းပြီး လက်ရှိ မ ဟ န ဥက္ကဌဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဗန်းမော်ဆရာတော်ထံကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လျှောက်ထား မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ၄င်းတံဆိပ်တော်နဲ့ဆက်စပ်သော စာအုပ်စာစောင်များလည်း လက်လှမ်းမီသမျှ ရှာဖွေဖတ့်​​ဖြစ်ပါတယ် ။ အဖြေကတော့ – ၄င်းတံဆိပ်တော်ကို အရိယာလို့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ကျမ်းပေါင်းများစွာရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ ကျမ်းတတ်အကျော် ပထမလယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံကို အမည်မသိရသေ့တစ်ပါးက လာရောက်ဆက်ကပ်သွားတဲ့ ကပ်ဘေးရောဂါအန္တရာယ်တို့ကို ကျော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်သော တစ်ကြောင်းဆွဲ ပထရမ ကပ်ကျော်တံဆိပ်တော်လို့ဆိုကြပါတယ် ။ ၄င်း ပထရမ. ကပ်ကျော်တံဆိပ်တော်ကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက် အောက်မြန်မာပြည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသတစ်ဝိုက်မှာ ပလိပ်ရောဂါကပ်ဘေးကြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျရောက်စဉ် မုံရွာ လယ်တီကျောင်းမှာသီတင်းသုံတော်မူနေတဲ့ လယ်တီဆရာတော်ဦးဥာဏကို သွားရောက်​လျှောက်ထားရာက ဒီတံဆိပ်တော်ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းပါ ။ ဒီတံဆိပ်တော်ကို အိမ်များ […]
သံသရာအဆကျဆကျ ဝဋျကွှေးကုနျလို့ ပွနျဆုံတဲ့အခါ အမဝေမျးထဲက အမရေဲ့ သားလေးတဈယောကျအဖွဈသားပွနျလာပါရစေ …
ကျေနပ်တယ် အမေ သား….ကျေနပ်တယ် လောကအလယ်မှာ အမေရဲ့သားလေးအဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့လို့ ….. လောကကြီးက မျက်နှာသာမပေးတော့ အမေဆိုသော …. အမေတစ်ယောက်နဲ့ အတူရှင်သန်ခွင့်မရတာကိုတော့သားဝမ်းနည်းမိတယ် ….. မငိုပါနဲ့ အမေ သားလာလမ်းကို အမေမှန်းဆပြီးလွမ်းနေပါ နောက်နှောင် ဘဝအဆက်ဆက် …… သံသရာအဆက်ဆက် ဝဋ်ကြွေးကုန်လို့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ အမေဝမ်းထဲက အမေ့ရဲ့ သားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သားပြန်လာပါရစေ … အခု့တော့ ……အခု့တော့ အမေ သားကိုသွားခွင့်ပြုပါဦး…. အမေ သက်ကျော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ….။မြောက်ဦးသားရွှေညာမြေ ကိသာဂေါတမီ …. ချစ်လှစွာသော သားဦး ရတနာလေးရောဂါ တစ်ခုကြောင့် ကွယ်လွန်သွား၍ ပရိဒေဝမီးတွေ တောက်လောင်နေသော ကိသာဂေါတမီကို မြတ်စွာဘုရားက…. ချစ်သမီး… ကိသာဂေါတမီ သေခြင်း~ဆိုတဲ့ သဘောတရားသည် ရွာတစ်ရွာ ~ မြို့တစ်မြို့~ နိုင်ငံတစ်နိုင် ထဲမှာသာ ဖြစ်တာ […]
ကွောကျလနျ့နကွေတဲ့အခြိနျ ခုလိုမြိုးလုပျတော့ လူထုအထတျတလနျ့ ဖွဈ…..
အန္တရာယ်ဇုံ …. February 8,2020 တရုတ်နိုင်ငံဟန်ကျိုး ပြည်နယ်မှာ မြို့လူထူဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးဆက်မှုကြောင့် ကြောက်လန့်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တိုက်ပေါ်ကခုန်ချ သတ်သေဘို့ လုပ်နေတယ်လို့ သတင်း ပေးမှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ အဆိုပါ နေရာ အနီးတဝိုက်ကိုလမ်းရှင်းပြီး …. သက်ဆိုင်ဆေးဝန်ထမ်းတွေ ကလည်း တကယ်လို့ အမျိသမီး ခုန်ချသေဆုံးခဲ့ရင် ကိုရိုနာ ရောဂါရနေသူဆိုရင် အန္တရယ်ရှိတာကြေင့် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းဘို့ အသင် လုပ်ထားပါတယ်။့ လက်ပါတ်နီအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း လူထုကို အနားမကပ်ကြဘို့ သတိပေးနေကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချဘို့ လုပ်နေသူဟာ နေလှန်းထားတဲ့ ကာမဖျော်ဖြေရေး အရုပ်ဖြစ်နေမှန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အဖြစ်မှန်သိသွားပြီး… တိုက်ခန်းအပြင်မှာနေထုတ် လှန်းထားသူ အရုပ်မပိုင်ရှင်အမျိုးသားကို ခုလိုမျိုး လူထုအထတ်တလန့် ဖြစ်စေမယ့်လုပ်ရပ်မျိုး မလုပ်ဘို့ […]
ကွောကျလနျ့နကွေတဲ့အခြိနျ ခုလိုမြိုးလုပျတော့ လူထုအထတျတလနျ့ ဖွဈ….
February 8, 2020 February 8, 2020 MM Live News
မိမိကံဇာတာမှာ ထီပေါကျကိနျး(ငှဝေငျကိနျး)ရှိ မရှိ တှကျကွညျ့ရအောငျ …
မိမိကံဇာတာမှာ ထီပေါက်က်ိန်း(ငွေဝင်ကိန်း)ရှိ မရှိ တွက်ကြည့်ရ​အောင် မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍ မွေးနံဂြိုလ်သက်နှင့်ပေါင်းပါ။ ပေါင်းထားသောရလဒ်ကို (၃)နှင့်စားပါ။ ရလဒ်ကမယူ၊အကြွင်းကိုသာယူရမည်။ ထိုအကြွင်းကိုတည် မိမိအသက်နှင့်ပေါင်းပါ။ ထိုပေါင်းထားသောရလဒ်ကို (၇)နှင့်စားပါ။ အကြွင်းရလဒ်သည် (၅) သို့မဟုတ် (၀) ကြွင်းမှထီထိုးပါ။ (၅)ကြွင်း လျှင် တစ်ဦးတည်းထိုးပါ။ (၀)ကြွင်းလျှင် စပ်တူထိုးပါ။ ပုံတွင်တွက်နည်းနမူနာပြထားပါသည်။ အားလုံး သိန်းထီဆုကြီးတွေပေါက်ပီး မိသားစုနဲ့အတူ ဘဝခရီးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ…။ credit -လေးစားစွာဖြင့် … ပေသီး။ unicode မိမိ ကံဇာတာမှာ ထီပေါကျ ကိနျး(ငှဝေငျကိနျး)ရှိ မရှိ တှကျကွညျ့ရ အောငျ 👍👍👍 မွနျ မာမှေးသက်ကရာဇျကိုတညျ၍ မှေးနံဂွိုလျသကျနှငျ့ပေါငျးပါ။ ပေါငျးထားသောရလဒျကို (၃)နှငျ့စားပါ။ ရလဒျကမယူ၊အကွှငျးကိုသာယူရမညျ။ ထိုအကွှငျးကို တညျ မိမိအသကျနှငျ့ ပေါငျးပါ။ ထိုပေါငျးထားသောရလဒျကို (၇)နှငျ့စားပါ။ […]
ဒီနေ့ မနကျ(11:00)နာရီလောကျ ကြောကျမွောငျး သီတာလမျးက အဖွဈအပကျြလေး အံ့သွလှနျးလို့ပါ…
ဒီလိုဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ အမှိုက်လှဲတွန်းလူငယ်လေးကို ဝိုင်းရှယ်ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုပေးကြပါ ….အံ့သြလွန်းလို့ပါ… 7-2-2020 ဒီနေ့ မနက်(11:00)နာရီလောက် ကျောက်မြောင်း သီတာလမ်းအိမ်ရှေ့ကားရပ်ပြီးကားထဲကဖိုင်ယူပြီး နောက်ဖုံးပေါ် ခဏတင်ပြီးကားနှင့်ပက်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများ မိတ္တူကူးပြီးပြန်အလာ ကားရဲ့နောက်ဖုံးပေါ်တင်ထားခဲ့သောဖိုင်ကိုပြန်မသိမ်းမေ့ခဲ့ပါတယ် …. ဖိုင်ထဲမှာ ကားအခွန်ဆောင်ရန်ငွေခုနှစ်သိန်းကျော် နှင့် မှတ်ပုံတင်သန်းခေါင်စာရင်း ကမ-၃ နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများ ကားမောင်းထွက်သွားစဉ် လမ်းပေါ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်…. တဖာလုံလောက်အရောက် အဲ့လူငယ်လေးကနောက်မှပြေးလိုက်လာတာကို ဘက်မှန်ကတွေ့မြင်သော်လည်းကားကို မောင်းမြဲမောင်းခဲ့ပါတယ်… ရှေ့ရောက်တော့ကားပိတ်နေ၍မောင်းမရဖြစ်နေချိန်…. အဲ့လူငယ်လေးက ကားနောက်ဖုံးကိုထုပြီး ဦးကားရပ်အုံးလို့လှမ်းအော်တော့ ကားရပ်ပေးလိုက်တာ အနားရောက်လာပြီး ဦးကားနောက်ဖုံးပေါ်ကပြုတ်ကျတဲ့ဖိုင် ဒီမှာပိုက်ဆံတွေလည်းအများကြီး ပြန်စစ်လိုက်အုံးဆိုတော့ တအားအံ့သြဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်… လောကမှာ ပညာရှိမှ ငွေရှိမှ အာဏာတွေရှိမှ ဂုဏ်ပကာသနတွေရှိမှလူတွေကအထင်ကြီး အဲ့လိုလူငယ်လေးတွေကျတော့ အမှိုက်ကောက်တဲ့ကောင်လေးတွေဆိုပြီး မြင်တာနဲ့အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့် မယုံသင်္ကာ ဖြစ်မိခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရှက်မိပါတယ်…. နောင်တလည်းရမိပါတယ်…ဒီလူငယ်လေးကကျောက်မြောင်းလမ်း သီတာလမ်း တလျှောက်အမှိုက်လှည်းတွန်းနေသူပါ ဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါနော်…..။ ကလေးရေ လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်…Congratulations. […]
လက်ရှိကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အတွက် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ အလှူ
၆ တန်းကျောင်းသား နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေ၍ မိဘများမှ ပြည်သူများထံ အကူအညီတောင်းခံ
၂၄. ၃.၂၀၂၀ရက်နေ့မှာ တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်ဖို့ မမေ့နဲ့နော် ….
ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီတော် ဘုရားပွဲတော်ကို မတ် ၂၁ ရက်ကစပြီး ပိတ်သိမ်းမယ်